Vista's Colorful Planet: November 2010
ကိုယ်တိုင် ပန်းရံလုပ်ပြီး တည်ဆောက်ထားတဲ့ နံရံ...
ဒီနံရံကို ကိုယ်တိုင်ဆောက်ထားမှန်းလည်း မသိ..
လူတွေနဲ့ တွေ့ ဆုံပေါင်းသင်းတိုင်း မှာ
နံရံ နောက်ကွယ်ကနေ ဆက်ဆံနေကြမို့ 
အကျင့်တွေပါလာလွန်းတော့ ဒီနံရံ တွေရှိနေမှန်းပင်မသိ ...
ဟန်ဆောင်ပြော ..ဟန်ဆောင်ရယ်မော ..
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဟန်ဆောင်မှန်းကို မသိတော့တာ ...
တကယ်ပဲ ကိုယ်ဟာ သူတို့ ကို ခင်မင်တယ် ထင်နေခဲ့တယ် မှလား ...
အလွှာတွေ အလွှာတွေ ...
နံရံတွေ နံရံတွေ ...
နောက်ကွယ်မှာပုန်း မှန်းမသိပုန်းနေရင်း နေခဲ့တာ ..
ဘာ့ကြောင့် လူတွေဟာ .. နံရံနောက်မှာ နေပြီး ကွယ်ဝှက်နေချင်တာလည်း.. ?
ဘာ့ကြောင့်အလွှာတွေ ခြားပီးမှ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံချင်တာလည်း.. ?
ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်းချက်တွေ မမြင်စေချင်လို့ လား...?
ပြစ်မျိုးမှဲ့ မထင် အကုန်အဆင်ပြေနေတာလို့ ပဲထင်စေ ချင်တာလား...?
လူတွေကိုကြောက်လို့ လား... ?
ဟန်ဆောင်ရတာကြိုက်လို့ လား... ?
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က နံရံတွေနောက်က ကြည့်နေသ၍...
သူများတွေရဲ့ အနားကိုမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာတော့ သတိပြုသင့်တယ်နော်....
အလွှာတခုခြားပြီး ပေါင်းသင်းနေသ၍ တဖက်ကလူကိုလည်း အလွှာခြားပြီးပဲ တွေ့ ရမှာမို့ 
နင့် ရှေ့ မှာ ကာမှန်းမသိကာထားတဲ့ နံရံတွေ
အလွှာတွေ ကို အရင် ဖြုတ်ချလိုက်ပါအုံး...
စစ်မှန်တဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို ရမှာပါ...
ဒါမှမဟုတ်လို့ ကတော့ ...
အပေါင်းအသင်းမရှိဘူး အထီးကျန်တယ် ..
ဘယ်သူမှငါ့ကိုငါခင်သလို မခင်ကြဘူးလို့ တော့လာမညည်းနဲ့..
(Dedicated to one of my friend )
Labels: Thoughts 10 comments | Links to this post
Definitive guide to using Weave Net CNI on AWS EKS
အသီးအရွက် အစိမ်းကြော် - ဒီနေ့တော့ သတ်သတ်လွတ် စားတဲ့သူတွေလဲ အဆင်ပြေစွာ စားနိူင်အောင်ရယ် အရန်ဟင်းတစ်မယ်အတွက် လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ ပြင်ဆင်နိူင်အောင်ရယ်အတွက် ထမင်းပူပူလေးနဲ့ လိုက်ဖက်လွန...
ဘဝမှတ်စု ၄ - တနေ့က ညီမတယောက်နဲ့ ဆုံဖြစ်တော့ စကားပြောဆိုနေကြရင်း သူက ကျွန်မမျက်နှာကိုကြည့်ကာ ရုတ်တရက် ဆိုလာတယ်။ အမမျက်နှာမှာ အရင်ကလို ပျော်ရွှင်ရိပ် မတွေ့ရဘူးနော်တဲ့....ေ...
Zero Waste ဆိုတာဘာလဲ ဘာလို့ Zero Waste Lifestyle နေသင့်သလဲ - ခုနောက်ပိုင်းမှာ ကမ္ဘာမှာရော မြန်မာမှာပါ ခေတ်စားလာတဲ့ စကားလုံးက Zero Waste ဆိုတဲ့ စကားပါ.. စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမရှိ ပေါ့လေ.. ဖွံ့ဖြိုးပြီးသောနိုင်ငံကြီးတွေမ...
ရင်ဘတ်ထဲကလူ (အက်ဆေး ၇) - မောင်ရေ.. အဝေးရောက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာ မောင့်မျက်လုံးထဲမှာ လှနေတဲ့ကျမကို စိတ်မချဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လား.. မောင်စိတ်ချမ်းသာအောင် ကျမ နှုတ်ခမ်းနီတွေ ပါးနီတွေ မဆိုးေ...
ယောဂအလေ့အကျင့်ကောင်းလေးစလိုက်ရအောင် - မယ်ရူပ ကိုယ့်တို့ကိုယ်၊ စိတ်ခန္ဓာ ကျန်းမာကြော့ရှင်းလှပသွားမယ့်ယောဂလေ့ကျင့်ခန်း/ ကျင့်စဉ်/ ဒဿနဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ ယောဂလေ့ကျင့်ခန်း အလေ့အကျင့်ကောင်းလေးစမကြ...